realme6က ၃ သိန်းဝန်းကျင်မှာ သုံးပျော်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလား?
realme5series ဟာ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ယှဉ်ရင် သူ့အားနည်းချက်တစ်ချို့ကြောင့် Mid-range မှာ ကိုယ်တွေအတွက် ညွှန်းရခက်တဲ့ Series ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် Customer ရဲ့ Feedback တွေကို ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရမလားပဲ။ realme6မှာ အဲဒီအားနည်းချက်တွေကို အားသာချက်အဖြစ်တောင် ပြန်ပြောင်းနိုင်ခဲ့သလား အောက်မေ့ရတယ်။
realme6ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေက
128/4GB ကို မြန်မာငွေ ၃သိန်း ၂သောင်း ၉ထောင် ၉ရာ (၃၂၉၉၀၀) ကျပ်
128/8GB ကို မြန်မာငွေ ၃သိန်း ၆သောင်း ၉ထောင် ၉ရာ (၃၆၉၉၀၀) ကျပ်ပါ
ပထမဆုံးစသုံးတာနဲ့ သိသာစေတဲ့ အပြောင်းအလဲမို့ အရင်ဆုံးပြောမယ်။ realme5တုန်းက 6.5” Display Size ကို HD+ Resolution ပဲသုံးခဲ့လို့ အားမလိုအားမရ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်6မှာတော့ Full HD+ ဖြစ်လာရုံမကပဲ 90Hz ပါ အပိုဆုအဖြစ် ပါလာပြီ။
သူ့ Display က LCD တွေထဲ Black Level, Brightness, Color တွေမှာ အကောင်းဆုံးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် Daily Usage နဲ့ Gaming အတွက်တော့ လုံလောက်တဲ့ Quality ရှိတယ်။
90Hz ကလည်း ကိုယ်တွေလို 60Hz AMOLED သုံးနေတဲ့သူကိုတောင် မျက်နှာငယ်စေတာဆိုတော့ User Experience ကို ကောင်းကောင်း အထောက်အကူပေးတဲ့ ဖြည့်စွက်မှုလို့ ဆိုချင်မိ။
နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ Single Punch Hole က Dual Punch Hole သုံးတဲ့ အစ်ကိုတော်6Pro နဲ့ယှဉ်ရင် အားသာချက်လိုတောင် ဖြစ်နေမလားပဲ။ တစ်ခုတော့ ထောက်ပြစရာရှိတယ်။
သူ့ Display Setting မှာ 60Hz နဲ့ 90Hz အပြင် သုံးတဲ့ App ကိုလိုက်ပြီး Auto ချိန်းပေးတဲ့ Smart Mode လည်းပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း Battery ချွေတာချင်တဲ့ကိုယ်တွေ ဒီ Mode နဲ့ ၁ နာရီကျော်လောက် ဖုန်းဆက်တိုက်သုံးပြီးချိန်မှာ ခေါင်းမူးတဲ့ခံစားချက်ကို ရတယ်။
ပြောချင်တာက Refresh Rate အတက်အကျကို Sensitive ဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ Mode တစ်ခုထဲမှာ တရားသေထားသုံးဖို့ အကြံပေးတာပါ။ Mid-range Display တစ်ခုအနေနဲ့ ကျန်တာ Ok ပါတယ်။
ဒီအပိုင်းက Battery Life ကို ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပဲ Battery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုအပိုင်းမှာ တိုးတက်လာတာဆို ပိုမှန်လိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး ကြိုဆိုရမှာက Type C သုံးလာတာ။ အဆန်းကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ပါလာလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
အဲဒီ Type C နဲ့အတူ ထပ်ပါလာတာက 30W VOOC Charger ပါ။ 4,300 mAh ကို ၁ နာရီစွန်းရုံနဲ့ အားပြည့်တာက5series တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အတော့်ကို စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်။ Battery Capacity နဲသွားတယ်ဆိုပေမယ့် Overall ကြည့်လိုက်ရင် Big Improvement လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
6 Display က Smart Mode ထားသုံးရင် Normal Usage ကို Battery Life တစ်ရက်စာ အေးဆေးခံတယ်။ ကိုယ်တွေသုံးထားတဲ့ ၁ ရက်ခွဲကို Screen Time 7hr မှာ PUBG 1hr ကျော်ပါတယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။
ဖုန်းကို မသုံးပဲပစ်ထားမိတဲ့ရက်တွေမှာလည်း Stand-by Drain ကလည်း ကျေနပ်ဖို့ကောင်းနေတာဆိုတော့ Battery အသားပေးရွေးချင်တဲ့သူတွေ သဘောကျလောက်မှာပါ။
ဒီအပိုင်းကိုလည်း Big jump အဖြစ် သတ်မှတ်ချင်တယ်။ Mediatek Helio G90T ဆိုတာ အသစ်အဆန်းတစ်ခု မဟုတ်တော့ပေမယ့် Snapdragon 665 နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် PUBG လို ဂိမ်းမျိုးကို Flagship Setting နီးနီး (HDR, Ultra or Smooth, Extreme) ဆော့နိုင်တာ ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းလွန်းနေတယ်။
Performance ကို အစွမ်းကုန် ညှစ်ထုတ်တတ်တဲ့ Mediatek အကျင့်အတိုင်း နာရီဝက်လောက် ဂိမ်းဆော့ရင် ဖုန်းပူတယ်။
မရည်ရွယ်ပဲ သွားတာက သူ့ရဲ့ Plastic Body နဲ့ Frame ကြောင့် Camera တစ်ဝိုက်က အပူနှုန်းက ဖုန်းနောက်ကျောတစ်ပြင်လုံးဆီ ထင်သလောက် မရောက်တာပါ။ ဆိုတော့ Glass Body တွေမှာလို အရမ်းပူတယ်မခံစားရဘူးပေါ့။
Major Changes လို့ယူဆတဲ့ အချက်(၃) ချက်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ Minor တွေဆီ သွားကြတာပေါ့။
5 တုန်းက 48MP ကနေ6မှာ 64MP ဖြစ်လာတာကို ဘာကြောင့် Major ထဲ ကိုယ်တွေမထည့်ခဲ့သလဲ?
သူ့ Day Time Image တွေက ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ရုပ်ထွက်အသေးစိတ်သလို Color အနေအထားကလည်း Saturate Color ကို Over မဖြစ်ပဲ အမြင်လှတယ်။
(Vibrant ဖြစ်တယ်ပေါ့) Dynamic Range လည်း မဆိုး။ 8MP Ultra-wide က HDR ကူရင် Social Media ပေါ် ခုရိုက်၊ ခုတင်နိုင်တဲ့ Landscape Shot တွေ ပေးနိုင်တယ်။ (Zoom တော့ မဆွဲကြည့်နဲ့ပေါ့။)
But.…different lighting tellsadifferent story.
အလင်းနဲလာတာနဲ့ Camera က ဇာတိပြတယ်ပြောမလားပဲ။ Noise ထတယ်။ ထတဲ့ Noise ကို ငြိမ်အောင်ထိန်းရင်း Exposure ကျတယ်။ Detail နဲ့ Sharpness တွေပါ သိသိသာသာ Drop ဖြစ်လာတယ်။
သူ့ Night Mode က အလင်းအတော်အသင့်ရှိနေရင်တော့ Zoom အဆွဲမခံတဲ့ ပုံကောင်းလေးတွေ ရပေမယ့် ကောင်းကင်၊ သစ်ပင်လိုနေရာတွေမှာ Noise ထိန်းရင်း ရေဆေးခြယ်ထားသလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်။
ဓာတ်ပုံဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်က Detail တွေ ပိုကျကုန်တယ်။ ပိုဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာက Ultra-wide Camera ရဲ့ Low Light Quality ကောင်းအောင် Night Mode က မကယ်နိုင်တာပါ။
ကျန်တာတွေပြောရင် Portrait က အလင်းကောင်းမှ အဆင်ပြေတယ်။ Skin Tone နဲ့ Detail အားမရ။ Macro နဲ့ 16MP Selfie က သာမန်ထက်မပိုဘူး။ Video အပိုင်းမှာ 4K ထိ ရတာလေး ကျေနပ်စရာဆိုပေမယ့် 1080p, 30fps မှာတောင် Stabilization က သိပ်မကောင်းချင်တာဆိုးတယ်။
ဒါတွေက Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ realme6ရဲ့ Camera ဟာ5တုန်းကနဲ့ယှဉ်ရင် တိုးတက်မှုက ထင်သလောက်မများသလို လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကို ထောက်ပြရုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hardware ပိုင်းကောင်းမွန်မှုဟာ Software ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ realme UI က သက်သေပြနေတယ်။ Powerful ဖြစ်တဲ့ CPU, 90Hz Display စတာတွေနဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ UI Experience က C3 တုန်းကထက် အများကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ကိုယ်တွေဖုန်းစရချိန်ကနေ ခုထိ Software Update ၂ ခေါက်ရပြီးပြီ။ System အနေနဲ့လည်း Stable အတော်ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်။
Google App တွေ Built-in ပါသလို တစ်ချို့ App တွေကို Default App အဖြစ် သုံးထားလို့လားပဲ၊ ဖျက်ခွင့်မပေးတာ သတိထားမိတယ်။ 90Hz ပါ ထည့်ပေါင်းထားတာဆိုတော့ အငြိမ်သုံးချင်သူတွေ အတော်အဆင်ပြေမယ့် UI လို့ ပြောရမှာပါ။
Mono Speaker က အသံထွက် အတော်ကျယ်တဲ့ အထဲပါတယ်။ Bass အသံလေး နဲနဲ Flat တာကလွဲရင် High Volume မှာတောင် Distortion မကြားရဘူး။
နားကြပ်တပ်နားထောင်ရင်လည်း Quality က ပုံမှန်လက်ခံနိုင်တဲ့ အနေအထား။ ဆိုတော့နားကြပ်ပေါက် ပါတာနဲ့ပေါင်းရင် Media Consumption အတွက် အသားပေးရွေးချင်သူတွေအဖို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Storage ပိုင်းမှာ အရင်လို EMMC အစား UFS 2.1 ကို သုံးလာတဲ့အပြင် SD Slot ကိုပါ သီးသန့်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ SD Card သုံးတတ်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
realme6ရဲ့ အားမရဆုံးအပိုင်းလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာထူးဆန်းတာဆိုလို့ USB ပေါက်ကနေ ထွက်လာသလိုဖန်တီးထားတဲ့ Gradient Design လေးပဲ ပြောစရာရှိလိမ့်မယ်။
realme Phone အများစုမှာ တွေ့နေကျ Design ကိုမှ Color ကပါ ပျင်းစရာကောင်းနေပြန်တယ်။ (ကိုယ်တွေတော့6Pro က မိုးကြိုးပုံ Color လေး ပိုကြိုက်တယ်)
သူ့ Plastic Body ကလည်း အတော်ပွယောင်းယောင်းနဲ့ ကိုင်ရမကောင်းသလို အစင်းထင်လွယ်နေပြန်တယ်။ ဆိုတော့ realme6က ဟန်ထက် အဆံကို ပိုတန်ဖိုးထားသူတွေအတွက် ပိုသင့်တော်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဆိုတော့ realme6ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ?
၃ သိန်းနဲ့ ၄သိန်းကြားက Challenger လို့မြင်တယ်။ ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ သူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်လို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ဖုန်းတွေအနေနဲ့ Redmi ရဲ့ K30 နဲ့ Huawei ရဲ့ Nova 7i တို့ရှိမယ်။
ဒီကောင်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် Performance ပိုင်းမှာ Realme6က နှာတစ်ဖျားသာတယ်ပြောရမှာပဲ။ Display အရဆိုရင် K30 နဲ့ Nova 7i ကြား အလယ်အလတ်အခြေအနေမှာရှိမယ်။
လက်ရှိ 90Hz နဲ့ Realme UI က Sweet Spot လို့ပြောနိုင်ပေမယ့် 120Hz နဲ့ MIUI 12 Combo က ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်
Camera ရော Audio ပိုင်းမှာပါ ဒီကောင်လေးက အလယ်အလတ်မှာရှိနေတယ်။ Battery အတွက်ဆိုရင်တော့ Nova 7i က အမိုက်ဆုံးပေါ့။
ဒါကြောင့် realme6ကို ဒီဈေးမှာ ရွေးပျော်မယ့်ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်ချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရှေ့က5Series ထက် သိသာတဲ့တိုးတက်မှုတွေက R-fan တွေအတွက် အားရစရာဖြစ်နေသလို သာမန် User တစ်ယောက်အတွက်လည်း ပေးရတဲ့ဈေးမှာ ကြီးကြီးမားမား အားမနဲနေတဲ့ဖုန်းဖြစ်နေတယ်။
ကိုယ်တွေအနေနဲ့ အားမရတာဆိုလို့ သူ့ ကျောဘက် Design, Low light & selfie quality, 8GB RAM အတွက် ပိုပေးရတာ များတယ်ခံစားရတဲ့ဈေး ဒီလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်။ ရေရှည်သုံးမယ့်သူအတွက်တော့ ပိုက်ဆံပိုများသွားတာမကြည့်ပဲ 8GB Version ကို ရွေးချယ်ဖို့ အကြံပေးပါ့မယ်။
realme6Official Homepage